मुचुल्का र मतपेटिकामा मतपत्रको सङ्ख्या फरक हुँदा विवाद
मुचुल्कामा उल्लेख भए अनुसार मतपेटिकामा मतपत्र नभेटिएपछि खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–८ धितुङको मतगणना रोकिएको छ।
मतगणना भएका सबै वडामा बालेनको अग्रता, कुन वडामा कति पाए?
काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा मतगणना भएका सबै वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन साहले अग्रता बनाएका छन्।
भरतपुरको मेयरमा रेणुले बढाइन् अग्रता
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की उम्मेदवार रेणु दाहालले अग्रता बढाउँदै लगेकी छन्।
तिलोत्तमा नगरपालिकामा एमाले उम्मेदवारले गृहमन्त्रीका भाइलाई पछि पारे रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा सत्तारुढ गठबन्धन र नेकपा (एमाले)का उम्मेदवारबीच कडा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ।
हेटौंडामा २४ हजार मत गणना, कसको कति? हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा मंगलबार मध्याह्नसम्म २४ हजार १३८ मत गणना भएको छ।
धनगढीमा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई ४४ प्रतिशत मत धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालले ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा मत पाइरहेका छन्।
भरतपुरमा साढे १८ हजार मत गणना, कसले कति पाए? भतरपुर महानगरपालिकामा मंगलबार मध्याह्नसम्म १८ हजार ५८३ मत गणना भएको छ।
ललितपुरमा चिरिबाबु महर्जन दोब्बर मतले अगाडि ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका चिरिबाबु महर्जन दोब्बर मतले अगाडि रहेका छन्।
खोटेहाङ गाउँपालिकामा गठबन्धन विजयी खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकामा सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका छन्।
यी हुन् १३० स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि निर्वाचन आयोगका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म देशभरका १३० स्थानीय तहको मतगणना सकिएको छ।
नेपालगञ्जमा कांग्रेस उम्मेदवारले लिए चार हजारको अग्रता नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले झण्डै चार हजार मतको अग्रता बनाएका छन्।
तेह्रथुमको लालीगुराँसमा माबुहाङ पुनर्निर्वाचित तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकाको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका अर्जुनकुमार माबुहाङ पुनर्निर्वाचित भएका छन्।
भरतपुरमा अग्रता बढाउँदै रेणु दाहाल
भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) की उम्मेदवार रेणु दाहालले फेरि अग्रता बढाउँदै लगेकी छन्।